Vaovao - Andro vaovao amin'ny 2021
Ao amin'ny valan'aretina pnemonia voan'ny coronavirus niely eran'izao tontolo izao, hanao veloma ny taona 2020 isika ary amin'ny 2021. Amin'ny fotoana handaozana ny taloha handray ny vaovao, amin'ny anaran'ny mpitarika ny vondrona biônera Chenguang, dia te-hanome vaovao fifampiarahabana tratry ny taona sy firarian-tsoa feno ho an'ny mpiasa rehetra sy ny fianakaviany izay sahirana any ivelany sy any an-trano, ary ho an'ny mpitondra amin'ny ambaratonga rehetra, ny tompon-trano, ny mpanjifa, ny mpiara-miasa ary ny namana avy amin'ny sehatra rehetra izay mikarakara sy manohana ny fampandrosoana ny bio Chenguang.
Asa mafy roapolo taona, voankazo lohataona sy fararano roapolo taona. Nandritra izay 20 taona lasa izay dia nifikitra tamin'ny fitsipiky ny fahamarinana lehibe izahay, niasa mafy sy nanolo-tena, ary nanao ezaka faran'izay kely noho ny olon-kafa. Chenguang bio dia nivoatra tamina orinasam-pivarotana atrikasa ho lasa vondrona misy lisitra iraisam-pirenena miaraka amin'ireo sampana mihoatra ny 30. Avy amin'ny vokatra tokana an'ny capsanthin, Chenguang bio dia manana andiany enina ankehitriny, karazany mihoatra ny 100 ary vokatra telo izao tontolo izao. Orinasa mitarika eo amin'ny indostrian'ny fitrandrahana zavamaniry. Manomboka amin'ny zazakely ka hatoky ny fahatokisan-tena, manomboka amin'ny zana-ketsa malemy ka maniry ho tonga hazo avo, ity dia angano indostrialy nosoratan'ny olona Chenguang rehetra miaraka amin'ny tolona sy fanavaozana!
Tamin'ny taona 2020, namely mafy ny valan'aretina pnemonia voan'ny coronavirus, ary very fatiantoka lehibe ny toekarena manerantany. Tamin'ny fiandohan'ny valan'aretina dia henjana ny toe-javatra fisorohana sy fanaraha-maso ny valan'aretina ao an-trano ary tsy ampy ny fitaovam-pitsaboana. Nividy zava-pisotro misy alikaola, saron-tava, fitafiana miaro ary fitaovana hafa amin'ny alàlan'ny loharanon-karena anatiny sy avy any ivelany ny orinasa voalohany, niasa ora fanampiny mba hanaovana kapsily malefaka lycopene, ary nanome ho an'ny laharana voalohany amin'ny valanaretina fanoherana. Miaraka amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina vahiny haingana, ny orinasa dia nanome saron-tava, kapsily malefaka lycopene ary fitaovana hafa ho an'ny mpanjifa vahiny. Nandritra ny vanim-potoanan'ny valanaretina dia alikaola 10 tapitrisa mahery, sarontava, fitafiana miaro, kapsily malefaka lycopene ary fitaovana fanoherana ny valan'aretina hafa no natolotra ho an'ny fiarahamonina ka nandray anjara tamin'ny ady amin'ny valanaretina. Etsy ankilany, raha ny zava-misy amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina, ny orinasa dia nametraka tamim-pitandremana ny famerenana ny asa sy ny famokarana mba hiantohana ny fiasan'ny famokarana sy ny asa, indrindra ny mpiasa voarindra hanao fambolena marigold any Xinjiang raha vantany vao vita ny Fetiben'ny Lohataona, mba hahazoana antoka fa tsy hisy fiantraikany amin'ny asa fizaran-taona. Nandritra ny taon-dasa, ny mpiasa rehetra dia nanao ezaka lehibe mba hampihenana ny voka-dratsy ateraky ny valanaretina, hiantohana ny fiasan'ny orinasa mitombina sy ny fitomboan'ny fahombiazan'ny orinasa mifanohitra amin'ny fironana. Nahatratra avo vaovao ny fidiram-bolan'ny orinasa sy ny tombom-barotra, ary nihoatra ny 140 tapitrisa dolara amerikana ny vola azony tamin'ny fanondranana. Ny sandan'ny tsena dia nitombo hatramin'ny 3,8 miliara tamin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny 9 miliara ankehitriny.
Amin'ny taona 2020, ny orinasa dia mifikitra amin'ny foto-kevitry ny mifantoka amin'ny mpanjifa, manao fanasokajiana tombony lalina, ary manatsara ny tombony azo amin'ny fifaninanana amin'ny vokatra. Ny haavon'ny varotra capsanthin dia nahatratra ambaratonga vaovao; ny habetsaky ny varotra vokatra lutein dia nitombo, ary tamin'ny alàlan'ny maody mialoha ny varotra, dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fametrahana ny fiovan'ny vidin-javatra sy ny fitazonana ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny indostria; ny akora proteinina dia miankina amin'ny trosa mba hahatsapany ny fisidiana hidiny raha mividy sy mivarotra, hisorohana ny loza mety hitranga; Nahazo zava-bita vaovao ny varotra sakafo ara-pahasalamana, nanomboka ny orinasa OEM sy ny fanondranana, ary lasa tetika marketing vaovao ny fiaraha-miasa any ivelany Ny firoboroboan'ny vokatra ara-tsakafo sy ara-pahasalamana dia tsara, ary ny fivarotana curcumin, ny masomboly voaloboka ary vokatra hafa dia nahavita be fitomboana. Mandritra izany fotoana izany dia mampiroborobo ny fananganana fotodrafitrasa akora ny orinasa. Any Xinjiang sy Yunnan Tengchong, ny velaran-tany marigold dia mihoatra ny 200000 mu; ny velaran-tany fambolena stevia manodidina ny distrikan'i Quzhou dia mihoatra ny 20000 mu; toeram-pambolena sinazonggui ao amin'ny orinasam-pambolena ao Zambia dia nahavita 5500 mu ny fambolena fitsapana dipoavatra, ny toeram-pambolena qishengsheng dia nahavita fivoaran'ny tany efa ho 15000 mu, ary nanatanteraka ny asa fambolena marigold sy ny dipoavatra.
Amin'ny taona 2020, ny orinasa dia manaraka ny fanovana teknolojia famokarana ary manohy manatsara ny tombony azo amin'ny fifaninanana. Vita soa aman-tsara ny fanatsarana ny silymarin, ny silymarin dia nitombo 85% ka hatramin'ny 91%, ary nihena be ny vidin'ny famokarana; ny fanitarana ny fahaiza-mamokatra proteinina dia vita tao Kashgar Chenguang, ary ny fahafaha-manodina isan'andro ny masomboly maivana dia nitombo 400 taonina hatramin'ny 600 taonina; ny fanatsarana ny dingan'ny famokarana stevioside dia nahatsapa ny fanovana ny vokatra CQA; vita ny fanovana ny vokatra QG nalaina tamin'ny sakafon'ny Tagetes erecta, ary nahatratra 10 taonina 0 taonina ny tsiranoka tokana famahanana chrysanthemum.
Amin'ny taona 2020, ny fananganana tetikasa vaovao an'ny orinasa dia hampiroborobo haingana hanangona angovo ho an'ny fampandrosoana ho avy ny orinasa. Nampiasaina ny boiler etona biomassa, ary nihena ny vidin'ny setroka; natambatra ireo tsipika fitrandrahana telo an'ny Yanqi Chenguang, ary ny taonina fanodinana ny poti-dipoavatra dia 1100 taonina. Mandritra izany fotoana izany dia vita ny fanamboarana ny fanadiovana sy ny fampifangaroana ny tsipika famokarana, ary tanteraka ny fanatontosana ny fitrandrahana, ny fanadiovana ary ny fifangaroana mivantana ny vokatra dipoavatra any Xinjiang. Ny orinasa Tengchong Yunma dia nahazo fahazoan-dàlana fanodinana hemp indostrialy miaraka amin'ny fampiasam-bola faran'izay kely indrindra, nahatsapa ny fitrandrahana teknolojia avo lenta ary namorona ny varotra vokatra, ary nanao dingana matanjaka teo amin'ny sehatry ny paikady indostrialy hemp orinasa. Nahomby ny fananganana "foibe telo" an'ny orinasa Handan Chenguang, nosokafana tamim-pomba ofisialy ny ivon'ny R&D, nosokafana tamim-pomba ofisialy ny trano misy trano 8, trano trano 7 ary trano trano 9 no nipetrahana Vita ny fanamboarana; Ny fatorana azo ovaina dia navoaka moramora, nanangona 630 tapitrisa yuan; napetraka tamin'ny laharam-pamokarana vaovao ny solika tsy fahita firy, ny tetikasa Hetian Chenguang ary ny tetikasa Yecheng chengchenlong; ny fananganana ny tetikasan'i Tumushuke Chenguang sy ny tetik'asa API dia natao tamim-pilaminana.
Amin'ny taona 2020, ny orinasa dia mifikitra amin'ny votoatin'ny R&D hanompoana ny famokarana sy ny asany, hampiroborobo hatrany ny fanatsarana ny fizotran'ny vokatra ary mampivelatra vokatra sy fampiharana vaovao hatrany. Tamin'ny alàlan'ny fikarohana sy fanatsarana ny fizotran'ny fanesorana sira sira oleoresin ary ny fizotran'ny pigmenta pigolida, tonga ny fampiharana ny famokarana, voavaha ny krizy fitehirizana ary nilamina ny famatsian-tsena; ny fanovana ny famokarana ny lycopene oleoresin saponification sy ny kristaly fanaovana kristaly dia vita, ary ny vokatra dia nihatsara; ny fanovana indostrialy ny fitrandrahana rosemary, silymarin ary tetik'asa vokatra vaovao hafa dia vita, ary tanteraka ny varotra lehibe; QG, CQA, Wanli, sns Ny làlan'ny fampiharana ny fitrandrahana fermentation Shouju, polysaccharide tongolo lay ary vokatra vaovao hafa dia voafaritra mazava tsara; ny teknolojia fikarohana infrared an-tserasera sy ivelan'ny Internet akaiky dia nahatratra zava-bita vaovao, ary ny fananganana sehatra mahomby dia nanao fandrosoana vaovao, izay nametraka fototra mafy orina ho an'ny fampandrosoana maharitra ny orinasa amin'ny ho avy. Ny orinasa dia nahazo ny loka «vita tany Chine · tompon-daka tsy hita» ary ny loka «Oscar» an'ny indostria China.
Amin'ny taona 2020, hanangona mpitsabo sy tompo maherin'ny 60 ny orinasa hampiditra ra vaovao ao amin'ilay orinasa; ny fanombanana tsy miankina lohateny matihanina dia mamaritra ny fomba fitantanana isa, ary ny isan'ny injenieran'ny zokiolona dia hitombo ho 23; hanohy hampitombo ny fomba fanazaran-tena talenta amin'ny "fiaraha-miasan'ny orinasan-tsekoly, fampidirana fanabeazana indostrialy" izany, ary hampiofana dokotera sy tompo 6 miaraka. Mpiasa telo ao amin'ny orinasa no voafantina ho "talenta tanora malaza indrindra ao Handan City" ary "Tetikasa Talenta telo telo telo" any amin'ny faritanin'i Hebei; Yuan Xinying dia nandrombaka ny anaram-boninahitra hoe "maodely ho an'ny mpiasa nasionaly" ary nanjary maodely iray an'ny mpiasa nasionaly hafa tany Quzhou taorian'ny 30 taona mahery, tena hita taratra ny "fampandrosoana iraisan'ny olona sy ny orinasa".
Amin'ny taona 2020, ny orinasa dia hanohy manatsara ny rafitra fitantanana ary manatsara ny haavon'ny fitantanana tsara. Manohy mampiroborobo ny fenitra, ny fizotrany, izany ary ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy ny fenitry ny asa. Mampiroborobo hatrany ny rafitra fitantanana fitantanana fito ary apetraka ny fototra fitantanana amin'ny fananganana atrikasa nomerika. Ny departemanta misahana ny fitantanana dia manatsara hatrany ny rafitra fitantanana miitatra amin'ireo sampana ary manamafy ny fitantanana sy ny fibaikoana ireo sampana. Hatsarao lalandava ny fomba fanombanana sy ny fandrisihana, ary alao ny fitarihana sy ny anjara andraikitry ny rafitra fanombanana sy fandrisihana.
Taorian'ny asa mafy nandritra ny 20 taona dia nanangona talenta, teknolojia, renivohitra, sehatra, kolontsaina ary loharano hafa ny orinasa. Amin'ny ho avy dia hanohy hanome lalao feno ny tombony azo avy amin'ny teknolojia fitrandrahana zavamaniry, fitaovana famokarana, R&D avo lenta ary fanaraha-maso kalitao, hampiditra loharanon-karena manankarena eto amin'izao tontolo izao, hanafainganana ny fivoaran'ny fotodrafitrasa fototra ao Zambia, manohy manangana fitrandrahana voajanahary sy sehatra ara-pahasalamana biolojika ary mampiroborobo fatratra ny sehatry ny fahasalamana lehibe manome sakafo ara-pahasalamana mahomby sy mora ho an'ny fiarahamonina.
Ao amin'ny 2021, tokony hanao asa mafy isika amin'ny famahanana ireo tombony azo avy amin'ny vokatra, manohy mamorona tombony mifaninana amin'ny vokatra azo avy amin'ny vokatra, ary manitatra bebe kokoa ny fizarana tsenan'ny capsicum, capicum oleoresin ary lutein vokatra; mamorona vokatra tokana mifaninana amin'ny vokatra ara-tsakafo sy ara-pahasalamana, stevioside ary vokatra manitra, ary miezaha ho mpitondra any Shina; mandray fepetra maro hampiroboroboana ny fampandrosoana ny fitrandrahana ginkgo biloba, ny fitrandrahana rosemary, ny silymarin, ary ny vokatra indostrialy Ny varotra hemp sy ny vokatra hafa dia hanafaingana ny fambolena ireo teboka fitomboana ara-toekarena vaovao an'ny orinasa, ary ny fizarana sakafo ara-pahasalamana sy fanafody nentim-paharazana sinoa. hanohy hanatsara ny fifaninanana sy hiezaka hahazo tombontsoa bebe kokoa.
Ao amin'ny 2021, tokony hifikitra amin'ny foto-kevitry ny "talenta, zava-bita ary tombony" isika, manatsara hatrany ny fomba fitantanana ny fikarohana siantifika ary manafaingana ny fanovana ny zava-bitan'ny siansa sy ny teknolojia. Manaraka ny fampiasana feno ny enti-manana, manohy mampiroborobo ny fampandrosoana sy ny fikarohana ireo vokatra manohitra ny zava-mahadomelina, manafaingana ny fananganana marika tsy miankina amin'ny sakafo ara-pahasalamana, ary manafaingana ny fampandrosoana ny indostrian'ny fahasalamana biolojika. Miaraka amin'ny "foibe telo" ho fanohanana, miezaha manangana sehatra fikarohana siantifika "mitarika iraisam-pirenena". Tokony hiezaka isika hanangona ny talenta voalohany feno, manam-pahaizana ary mitarika talenta ao amin'ny indostria ao an-trano sy any ivelany, manatsara hatrany ny rafitra fiofanana momba ny mpiasa, manome kilalao feno ny fahaizan'ny mpiasa ary miezaka manangana ekipa manam-pahaizana avo lenta izay te hiasa, afaka miasa ary afaka manohana ny fampandrosoana haingana ny orinasa.
Ao amin'ny 2021, dia hanohy hampiroborobo ny fananganana fenitra fitantanana, ny fizotrany ary izany izahay, ary hanatsara hatrany ny haavon'ny fitantanana tsara. Manohiza manamafy sy manatsara ny rafitra fitantanana fiarovana fiarovana, manamafy ny fahatsiarovan'ny tsipika mena ny famokarana fiarovana, miantoka ny famokarana fiarovana; manao asa mafy amin'ny fitantanana rafi-pamokarana fito, mandrafitra mavitrika ny fananganana atrikasa maodely nomerika, manohy mamorona tombony amin'ny famokarana, manatsara ny fifaninanana vokatra feno; mavitrika hampiroborobo ny famerenana amin'ny laoniny ny lovia vita amin'ny landy, ary hampiroborobo ny fandrosoana haingana sy tsara kokoa amin'ny orinasa lovia vita amin'ny landy.
Amin'ny taona 2021, dia hotohizantsika hatrany ny foto-kevitry ny kolontsaina momba ny "fampandrosoana iraisan'ny olona sy ny orinasa", hampandroso ny kolontsain'ny orinasa madio sy mahitsy, mazoto ary be fandavan-tena, marina sy mendri-pitokisana, marina ary fifehezan-tena, manaraka ny fitsipika ny fiezahana ho an'ny vahoaka, ary manome sehatra asa asa kilasy voalohany ho an'ny ankamaroan'ny mpiasa hahatakatra ny nofinofiny sy ny soatoavin'izy ireo.
Amin'ny taona vaovao, tokony hifikitra amin'ny torolàlana momba ny fanavaozana sy ny tolona mafy isika, miaraka amin'ny fanahin'ny fandroahana ny andro sy ny fikirizana, tsikelikely, mankany amin'ny tanjona lehibe hananganana ny indostria voajanahary voajanahary eran'izao tontolo izao, hahatonga ny indostrian'ny fahasalamana biolojika lehibe kokoa sy matanjaka kokoa, ary mandray anjara amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​mandroso amin-kerim-po ary hiara-manoratra ny ho avy mamirapiratra biolojika Chenguang!
Ary farany, mirary tontolo andro sambatra ho anao aho, asa milamina, fahasambarana ao amin'ny fianakaviana ary ny tsara indrindra!